Madaxwaynaha Puntland oo ka hadlay khilaafka dowladda - BBC News Somali
Madaxwaynaha Puntland oo ka hadlay khilaafka dowladda
19 Sebtembar 2010
Image caption Madaxwaynaha Puntland
Madaxwaynaha maamul goboleedka Puntland, Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed 'Faroole', ayaa ugu baaqay dowladda ku meelgaarka ah madaxdeeda sare in ay xaliyaan khilaafka dowladda.
Madaxwaynaha Puntland, oo u waramay Weriyaha BBC, Cabdiraxmaan Koronto, ayaa sheegay in ay lagama-maarmaan tahay madaxda sare ee dowladdu ay sii wadashaqeeyaan inta uu xilligooga oo aanuu wax badan ka dhimanayn ka dhamaanayo.
Wuxuu sheegay in dowladda oo la ridaan xilliga aysan xal ugu jirin guud ahaan madaxwaynaha iyo dowladaba. Wuxuu sheegay in madaxwayne Sheekh Shariif ay wada hadleen, balse uu madaxwaynuhu u muuqdo in uusan diyaar u ahayn in khilaafka wadahadal lagu xaliyo.
Madaxwayne Cabdiraxaan Sheekh Maxamed, wuxuu soo dhoweeyay tallaabada uu guddoomiyaha baarlamaanku dib uu dhigay shalay fadhiga baarlamaanka ee lagu waday in kalsoonida loogu qaado dowladda ra'iisul wasaare, Cumar Cabdirashiid.